Nwere pink snow | Netwọk Mgbasa Ozi
Gịnị bụ pink snow
Mgbe onye ọ bụla na-ekwu maka snow ha na-eche n'echiche na nnukwu blanket na-acha ọcha na-ekpuchi ubi na ugwu na-abata n'uche, Otú ọ dị, e nwere ihe na-esiwanye nkịtị onu nke snow amama kpamkpam pink.
Ọ bụ ezie na ụdị snow a nwere ike ịdị ọmarịcha site na anya, nguzobe ya bu ihe ojo na odigh ezi ihe obula m gwara gi n’okpuru.
Snow pink nwere nkọwa sayensị ma ọ bụ na njirimara a na-adọtakarị ndị na-ahụ ya, Ọ bụ n'ihi microalgae nke nwere ike iru ọtụtụ nde akwụkwọ maka centimita ọ bụla nke snow.
Pinkcha pink na-acha odo odo bụ n'ihi spores na-enye nnukwu okooko osisi mara mma nke a maara dị ka "okooko osisi". Dị ihe a nwere ike ime n’akụkụ ọ bụla nke ụwa ọ bụrụhaala na ọnọdụ ihu igwe dị mma. Agbanyeghị, enwere akụkụ ụwa karịa nke a na-akpọ pink snow, dị ka Greenland, Norway, Iceland ma ọ bụ Sweden. Microalgae na-eme ka snow gbazee ọsịsọ karịa nke nkịtị na nke a na-akpata ifo karịa n'oge snowy niile. Nsogbu di na nke a bu na gbazee snow a na-eme ka okpomoku zuru uwa di egwu.
Ndị ọkachamara n'okwu a na-eche na snow a na-akpọ pink ga-abụ ihe a na-ahụkarị na afọ ndị na-abịanụ, ọkachasị n'ihi mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa nke ụwa niile na-ata ahụhụ. Ọ bụ ya mere eji ewere snow pink dị ka ihe mara mma, yana nke ọjọọ na nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ pink snow
Ọnọdụ ikuku ụwa
Dị oke ohia na Spain